China Precision insimbi engagqwali amashidi Ukwakha kanye Factory | I-Huaxiao
Insimbi engagqwali ejwayelekile enobukhulu obuphakathi kuka-0.01-1.5mm, amandla aphakathi kuka-600-2100N / mm2 nensimbi engagqwali egoqwe ngamakhaza ichazwa njengensimbi engagqwali ngokunemba okukhulu. Iphutha lokunemba kwepuleti lensimbi engagqwali enqubweni yokukhiqiza lincane kakhulu kuneleshidi elijwayelekile. Ngokuvamile cishe ku-5um noma ngaphansi.
Amandla we-Sino Insimbi engagqwali mayelana Precision insimbi engagqwali ishidis
Ububanzi: I-100mm - 1250mm, imikhiqizo encishisiwe pls hlola kumikhiqizo ye-strip
Ubude: 100mm - 3000mm (ububanzi <ubude)
Ibanga:301, 430, 410, 420, 304, 304H, 304L, 305, S316, 316H, 316L, S321, 321H, 332, 334, 409, 439 S30100, S43000, S41000, S42000, S30400, S30409, S30403, S30500, S31600 , S31609, S31603, S32100, S32109, N08800, S33400, S40930, S43035
Isicelo mayelana Precision engagqwali amashidi
Izingxenye Zokuxhumana / Zekhompyutha
Ukusetshenziswa: amaseva ekhompyutha, izingxenye zezingxenyekazi zekhompyutha, izingxenye zomakhalekhukhwini, okhiye befoni ephathekayo, izingxenye zokuqapha, izingxenye zegundane, amakhibhodi, izixhumi, i-Disk drive zero linda.
Izinto: insimbi engagqwali i-CSP - i-SUS 301, i-SUS 304, i-SUS 410, i-SUS 430.
Ukusetshenziswa: izingxenye zokubamba, uhlelo lwesihlalo sebhande, amapayipi wesilinda, izinduku zokuthola uwoyela, amasistimu wokukhipha, indandatho yokwandisa indandatho, ikhava yesihlungi segesi, ama-gaskets enjini, izinsimbi zemoto, isibuko semoto nokunye.
Izinto: Insimbi Engagqwali CSP - I-SUS 301, I-SUS 304, I-SUS 202.
Izingxenye zikagesi / zasendlini
Ukusetshenziswa: ama-loom healds, amabhethri enkinobho, amakhamera, i-Walkman, umdlalo wevidiyo, i-TV ,, oveni bama-microwave, izinsimbi, abahlanganisi, i-razor kagesi, i-heater kagesi. Izingxenye zezibhamu ze-Electron, izixhumi ze-elekthronikhi, iziqandisi, imishini yokuwasha, ama-CD player, imishini yefeksi, ama-photocopiers, amaphrinta, amakhamera wevidiyo
Izinto: Insimbi Engagqwali CSP - I-SUS 301, I-SUS 304, I-SUS 430.
Ukusetshenziswa: amaphampu wamakhemikhali, amapayipi, ukupakisha kwamakhemikhali, ama-gaskets enxeba, izibopho zepayipi njalonjalo.
Okubalulekile: Insimbi engenasici CP - SUS 304, SUS 316 L.
Ukusetshenziswa: i-substrate yamandla elanga.
Okubalulekile: I-CP yensimbi engagqwali - i-SUS 430.
Ukusetshenziswa: Ukugoqa intwasahlobo yamaqabunga.
Izinto: insimbi engagqwali i-CSP - SUS 301.
Imikhiqizo eqine High
Ukusetshenziswa: Intwasahlobo yamandla / amandla e-Constant Force, i-Car Seat Belt, i-Lageage Spring / i-Window Drive, i-Vacuum Cleaner Retractor, i-Dog Link Chain.
Ubukhulu: 0.05mm ~ 0.4mm.
Imboni yewashi / imboni yasentwasahlobo yekhoyili
Ukusetshenziswa: uhlelo lwebhande lesihlalo semoto, izingxenye zentwasahlobo zasentwasahlobo.
Izinto: Insimbi engagqwali i-CSP - i-SUS 301 impahla eqine ngamandla.
Imikhiqizo yomkhakha kawoyela negesi
Ukusetshenziswa: gasket Kuvunguza.
Izinto: Insimbi Engagqwali CSP - SUS304, SUS316L.
Ubukhulu: 0.15mm ~ 0.25mm.
Ubulukhuni: SOFT, HV180 Max.
Ukusetshenziswa: Okokufaka izinto.
Izinto: Insimbi Engagqwali CSP - SUS301, SUS316L.
Ubukhulu: 0.025mm ~ 0.05mm.
Ukusetshenziswa: Amafilimu e-Aladdin, njenge-dome emise okonxantathu, i-dome emise okonxantathu (enezinyawo), i-dome emise okwe-cross, i-dome emise i-dome, i-dome emise okonxande.
Izinto: insimbi engagqwali i-CSP - SUS301, SUS304, SUS430.
Ubukhulu: 0.02mm ~ 0.09mm.
Okubalulekile: Insimbi engagqwali i-CSP - SUS304.
Langaphambilini NO.4 amashidi ensimbi engagqwali
Olandelayo: 304 insimbi engagqwali ishidi
Precision insimbi engagqwali ishidi